Weerarada burcadbadeeda oo hoos u dhacay – Radio Daljir
Weerarada burcadbadeeda oo hoos u dhacay
Oktoobar 22, 2012 8:05 b 0
Kuala Lumpu, Oct 22 – Weerarada ay kooxaha burcadbadeedu? ku hayaan maraakiibta ayaa sanadkan 2012? siweyn hoos uga dhacay sanadihii hore,? sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay’adda Badaha Caalamiga ee IMB.
Ilaa 70-weerar ayay burcadbadeedu qaadeen sanadkan, waxa ay aad hoos uga? dhacday marka loo eego sanadkii 2011 oo ay dhaceen 233- weerar.
Hay’adda IMB ayaa xustay faragalinta calaamiga iyo tallaabooyinka xagga amniga loo qaaday inay hoos u dhigtay tirada weerarada burcadbadeedu gaystaan.
Catain Pottengal Mukundan, agaasimaha hay’adda IMB ayaa yiri.
“Waa war wanaagsan wararka ah afduubyada inay hoos u dhaceen, balse wali ma jirto amaan buuxda- welli khatar xoogan ayaa dhanka badda ka jirta waana inay howlaglada sii wadaan maraakiibta la dagaalanka burcadbadeeda ee jooga”
Hay’adda IMB ayaa gabagabadii sheegtay burcadbadeedu inay? welli madaxfurasho u haystaan 11-markab oo ay saaranyihiin 167- shaqaalle.
Cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo tababar loogu soo xiray xerada 54-aad.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland oo ka waramay socdaal dalka Ingiriiska uu ku joogo